सोलु खोलामा पानीको वहाव बढ्यो, अवस्था पहिचानका लागि स्थानीय परिचालन - News Of Himalaya, Proud Of Nepal
सुमेरु संबाददाता २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०७:००
सोलुखुम्बु – सोलु खोलामा पानीको सतह बढेको छ । शुक्रबार विहान करिब ३ बजेको पेरिफेरीबाट पानीको सतह बढेको हो । तुइनटार लघुजलविद्युत आयोजनामा कार्यरत प्राविधिक रमेश बास्तोलाका अनुसार २० देखि ३० प्रतिशत सम्म पानीको वहाव बढेको छ ।
मुढासहित लेदो पानी आएपछि सल्लेरी च्याल्सा विद्युत कम्पनीको विद्युत उत्पादन प्रक्रिया बेलाबेलामा समस्या आएको छ । निरन्तर लेदो सहितको धमिलो पानी आएकाले बेलाबेलामा विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा अबरुद्ध आएको कम्पनीका एक प्राविधिकले बताए ।
जोखिम हुनसक्ने भन्दै सोलुखोला किनारका वस्तीमा सावधानी अपनाउन सूचना जारी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्गेल जाङबु शेर्पाले माथिल्लो भेगका स्थानीयलाई अवस्था बुझ्नलाई पठाएको बताए । उनले भने, ‘ग्लेशियर फुटेको हुनसक्छ ।’
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद गौतमले दुधकुण्ड पोखरी फुटेको बजार हल्ला सत्य नभएको बताए । उनले भने, ‘नआत्तिऔँ, सावधानी जरुर अपनाऔँ ।’
सोलु खोलामा पानीको सतह बढेपछि ….
Gepostet von Sumerunews am Donnerstag, 6. August 2020